အြန္လိုင္း - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
တွေ့ဆုံယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက် အွန်လိုင်း၊အဖြစ်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများအကြောင်းရှည်လျားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ။ သင်သင်ကြားတွေအများကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်တွေဘယ်လိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်နှင့်သင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဦးဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်။ ခိုင်ခံ့သောမိသားစုအနာဂတ်အတွက်၊သို့သော်ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောပေါ်လာခြင်း။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊အရေအတွက်၏ကွာရှင်းပြီးယခုနှစ်အတွင်းကြီးစွန်းနှင့်အတူတစ်ထောင်တည်တံ့မပိုထက်အနှစ်။ ပြဿနာကဘာလဲကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်'ခွက်တွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းသင်ကူညီလိမ့်မည်ရှာဖွေတစ်ဦးအသက်အဘို့အကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်အများဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်း။ ငါဖူးတွေ့လိုက်ဖက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုချင်းစီ၏၊သူတို့ကိုကျွန်မအရမ်းယူတယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအလေးအနက်လာမည့်အဆင့်အထိ၊လူအပေါင်းတို့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပေါ်များမှာ။ ပေါလု။ကောင်းတစ်ဦးကိုရှာဖွေအမျိုးသမီးများအတွက်အသက်တာ၏အပြည့်အဝပြန်အလှန်မေတ္တာနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို။ ဒါဟာမဖြစ်သင့်အနေနဲ့ဆီးအတား။ လုံလောက်တဲ့ကိတ်မုန့်။ လူတိုင်း။ ကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်အကြိုက်ဆုံးယောက်ျား၏အနှစ်။ ဦးစားပေး:စိတ်ချယုံကြည်၊အကြီးတန်း၊အရာတစ်ခုထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ပါသည်။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးချစ်စရာစုံတွဲနှစ်ဦးမိန်းကလေးများနှင့်အသက်အရွယ်။ ကျနော်တို့အတူတကွနေထိုင်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအစီစဉ်။ မွေးဖွား။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ကျနော်တို့ရှာဖွေနေများအတွက်ကျန်းမာသော၊အားကစား၊အဘယ်သူမျှမမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်၊အသိပညာဖွံ့ဖြိုးရေး၊လူငယ်ပညာေရး။ အားလုံးအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်ဖြင့်ပေးပို့စာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ။ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ကောင်လေးဘဲမကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊ဖြစ်နိုင်ရင်မိသားစုစတင်နှင့်အတူအဟောင်းစစ်သား။ မင်္ဂလာပါ၊အိုကေ၊ကျွန်မဟာသာမန်လူသာမန်အလိုနှင့်အလိုဆန္ဒ။ မချိန်အများကြီးဖြုန်းအပေါ်။ စာပေထဲမှာ၊ငါသည်တွေ့လိမ့်မည်လူ၊သူရပြန်အလှန်စာနာစိတ်နှင့်ဘုံအကျိုးစီးပွားကိုတွေ့ဆုံကြည့်ရအောင်၊စကားပြောသာ နှင့်အတူအခွင့်အတွက်၊သင့်ရဲ့စိတ်ကိုအခွင့်အလမ်းရှာတွေ့ဖို့အတွက်တိရစာန်-အင်တာနက်ကနေတဆင့်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအ ၊အရာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ပဲမနေနက်ကသင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။.
ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဤအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလေးအနက်နှင့်ပျော်စရာချိန်းတွေ့ဒိန္း။ သင်တို့အဘို့အပွင့်လင်းအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းရက်တစ်ပါတ်၊နှစ်ဆယ်လေးနာရီတစ်နေ့လျှင်၊အမွတ္တိုေ၊နှင့်အခြားအခက်အခဲများ။ တက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကမ်းလှမ်းချက်များရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အပတ်တိုင်း။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အများအတွက်ယောက်ျားနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်း၏။ ဖန်တီးကျွမ်းနှင့်အတူယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေး၊ယောက်ျားမိန်းမ၊သူနှစ်ဆယ်၊သုံးဆယ်သို့မဟုတ်အတောင်ခြောက်ဆယ်နှစ်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့ဒိန်း။
မှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အတည်ပြုရန်သင်၏ဖုန်းကိုအရေအတွက်နှင့်အလုပ်အသစ်အသိအကျွမ်းနှင့်အတူဘိုအမျိုးသမီး(သာအတွက်သီရိလင်္ကာချက်တင်နှင့်ဇုန်။ ကျနော်တို့ကအကောင်းရှိသည်၏ကွန်ယက်အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ဘိုသူလည်းရှာဖွေနေ။ မရှိကန့်သတ်အရေအတွက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်ဆက်သွယ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူအတုအကောင့်အသစ်များ၏။ ကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မည်ကိုရိုက်ထည့်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အရှာကြသည်လျှင်သင်အသစ်တစ်ခုကိုကျွမ်းသာကိုလံဘို၊သီရိလင်္ကာ၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပေးပါ။
။ အုပ်စုတစ်စု၏လုံခြုံရေးအစောင့်ငြင်း ခြေလက်။ အဆိုပါပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ဒီကနေအရွယ်ရောက်ပြီးသား၊အပယ်ခံသမီး က ၉ အသက်အနှစ်။ ရွာတစ်ရွာအနီးတွင်နေထိုင်သည်၊သူမည်သူမဆိုသိ။ ဒါပေမယ့်အနှောင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အမွား။ ငါသမီးတစ်ဦးဖြစ်သူဖြည့်သောကြောင့်ငါ့ကိုသူမအကြားအကြှနျုပျကိုငါသည်အပင်စင်။ ငါတူ။ ကၽြန္ေမျိုးသမီးတစ်ဦးအားသူချစ်သား၊အမိနှင့်သမီး။"ကၽြန္ေတာ္ကအသေးစား၊ဆင်းအအေး။"ငါသွားဖို့ယူနက်ရေချိုးဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာအသက်ကြီးသူအဖို့လူကမေးတယ်။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးမနှစ်မြို့ဖွယ်။ ငါအချို့ကောက်သောအရာတို့ကိုငါလုပ်နေတာနဲ့တူခံစားရ။ ဤသည်အလွန်ခက်ခဲသောစကားလုံးနှင့်အလွန်ခက်ခဲတဲ့အရေးယူရန်၊ရန်နီးစပ်ဖြစ်လာ ။ ဒီ ။ သင်မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့အားလုံးအတွက်ဒေသများ။ မှတ်ပုံတင်ထားနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများအတွက်တည်နေရာအခွင့်အလမ်းတည္ရွိေသာ၏တိုင်းဒေသကြီးအတွက်နေအိမ်သို့၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားတိုင်းဒေသကြီးများ၏အ ဇုန္။ ဒါကြောင့်သင်ဟာချင်တယ်ဆိုရင်လး၊သူငယ်ချင်းများ၊အသစ်အသူတွေ မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု၊ခံစားချိန်းတွေ့ဆိုက်။
ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စု"ဒိယိုချိန်းတွေ့"။ အတွက်အသံုုးခ်လိမ့်မည်အကြောင်းကြားအားလုံး၏သတင်းနှင့် ။ ယနေ့တွင်၊အားလုံးအမျိုးမျိုးချိန်းတွေ့ကစားတဲ့(ဒါအမည်ရှိသောကြောင့်၎င်း၏သမ်ကျပန်းရှာရန်အ)အလွန်လူကြိုက်များ။ ဤသည်အံ့သြစရာမဟုတ်သောကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးအွန်လိုင်းရှည်လျားပြီး"အခြေချ"ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ၌၊နှင့်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ဒိန္းဗီဒီယိုချက်တင်၊အမေရိကန်လိုလိုကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်-ဒါကြောင့်အချိန်ကိုသာကိစ္စ။ အကြားအခြားပစိဖိတ်ချိန်းတွေ့ကစားတဲ့ထွက်ရပ်တည်အဆိုပါစီမံကိန်းကိုဒိန်းဗီဒီယိုချက်တင်၊အရာထက်သာလွန်သည်အခြားအလားတူစီမံကိန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယ်လူကူညီပေးသည်ပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖို့သူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်း၊အသစ်အသိအကျွမ်း၊တခါတရံပင်မေတ္တာကိုရှာတွေ့။ အ၏အမည်နှင့်ချိန်းတွေ့ချက်တင်"ကစားတဲ့"ကိုညွှန်ပြ၏နိယာမတွေ့ရှိများအတွက်မိတ်ဖက်ဆက်သွယ်ရေး၊အရာအပေါ်ထွက်သယ်ဆောင် ၏အခြေခံကျပန်းရွေးချယ်မှု။ ဆိုလိုသည်မှာအမျိုးအကစားတဲ့ဂိမ်းသင့်ရဲ့အနိုင်ရလိမ့်မည်အကျိုးစီးပွားနှင့်ဖြစ်ကောင်းအသစ်။ တဦး၏တိုက်ရိုက်ကစားတဲ့သည်၎င်း၏အဖော်။ ဒီခွင့်ပြုပင်အများဆုံးရှေးရိုးစွဲဖို့လူတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရသူတို့၏ရှုပ်ထွေးသောနှင့်ခံစားဖို့ပိုပြီးလျှော့ပေါ့၊ဆက်သွယ်အလွယ်တကူနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့မှအမျိုးသားအပေါင်းတို့တိုင်းဒေသဒိန္း။ သူတို့ပြောသကဲ့သို့-ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်၊သင်ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ချိန်းတွေ့ချက်တင်ကစားတဲ့အသာမူလလမ်းမှဖြည့်ဆည်းဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၊ဒါပေမယ့်လည်းပေမယ့်၊ဟုတ်ပါတယ်၊အများဆုံးအသုံးပြုလူအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းချိန်းတွေ့"ကစားတဲ့"ရှစ်ယောက်၊ကိုယ့်ပြောဖို့အစိမ်း၊အရာအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်အသစ်အသွင်။ လမ်းဖြင့်၊အလွန်မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောအသွင်ချစ်ကြည်ရေးသို့လှည့်ချစ်ကြည်ရေးအတွက်အမှန်တကယ်အသက်မမေ့မလြော့ပါ။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းချိန်းတွေ့ချက်တင်ကစားတဲ့အကြံပြုက္ျသုံးစွဲသူများ၏၊ ကိုယ်ကျင့်တရားစံလည်းတင်းကျပ်စွာစောင့်ကြည့်လေ့လာ၊ဒါပြုမူမရိုင်းစိုင်းသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့ အပြုအမူအပေါ်အစိတ်အပိုင်းအ ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်လေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အိပ္ခမည်သူတားမြစ်အသံုးျပဳသူမ်ားတန္းဒီစည်းမျဉ်း။ လျှင်သင်အခြားချိန်းတွေ့ချက်တင်"ကစားတဲ့"သင့်မိတ်ဆွေသင်သည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်၊ဒါကြောင့်ကိုလျစ်လျူရှုကျေးဇူးပြုပြီးနှိပ်ပါ"နောက်တစ်ခု"။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဖွင့်ဖို့လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆက်သွယ်ဖို့အများကြီး၊နှင့်သင်ချင်တယ်အဖြစ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟို၊ချိန်းတွေ့ချက်တင်ကစားတဲ့အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်။ ကိုလိုက်ရှာသည်အဖော်နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုအပေါ်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်သုံးပြီးအမိုက်နှင့်ဝဘ်။ ကျနော်တို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဖို့အလုပ်သင့်ဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့။ တယ်"ဒိန်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့"အဖြစ်အဆင့်သစ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏။ ဗီဒီယိုကစားတဲ့ချိန်းတွေ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်အားလုံးသည်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကို။လောကသို့ခုန်ချပြီးပျော်စရာ၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့လူများနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေမှာဗီဒီယိုချက်တင်အခုအချိန်မှာ။ ချက်တင်ကစားတဲ့အွန်လိုင်းအထောက်အကူဖောက်သည်များ၏အကူအကွန်ပျူတာကွန်ယက်အင်တာနက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှမိမိတို့အဘို့ဆုံးဖြတ်၏ပြဿနာကိုရှာဖွေရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနှင့်ဖော်ရွေသောတွေ့ဆုံအတူစိတ်ဝင်စားဖို့ပီ။ ဒီဆောင်းပါးမှာမှာကြည့်ရှုမည်နည်းဖို့အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်။ သုံးဖို့အတွေ့အကြုံဒိန်းရင့်ကျက်အမျိုးသမီးဗီဒီယိုချက်တင်အပေါ်ဝဘ်ဖစ္သျ၊ယောက်ျားရှိအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းကိုဆက်သွယ်ဖို့အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်။ လှည့်ကင်မရာကိုအပေါ်၊သင်ကြားသူမ၏အသံ၊သူမ၏အမူအရာများ၊အပြုံးများ။.
"တွေ့တဲ့ခင်ပွန်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ"ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်ပါသည်လူသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊အကြောင်းဆက်သွယ်ရေး၊ချစ်ကြည်ရင်း၊ပရောပနှင့်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အခါသင်အစီအစဉ်တစ်ခုခုအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊လာသောပထမဦးဆုံးအရာအစိတ်သည်ဆောင်းရာသီအားကစား။ သွားႏ၌၊ပျော်မွေ့၏ဇိမ်ခံ ။ ၊သို့မဟုတ်အလည်အပတ်တွင်ရှိပြီး၊မြို့တော်၏သဘာအတွက်ဆွစ်ဇာလန်တောင်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့ချစ်ရသူအတွက်အချစ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊သင်လေးမြတ်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လေထု၏။ လမ်းလျှောက်ယူသောအားဖြင့်အဟောင်းကိုမြို့၏ဂျနီဗာနှင့်ထို့နောက်အနားယူနှင့်အတူကော်ဖီတစ်ခွက်ကားအစဉ်ရသောအလှရေကန်ဂျီနီဗာ၏။ နေ့တိုင်းပိုပိုပြီးလူအဘို့အမှတ်ပုံတင်မည်"ရှာခင်ပွန်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ"။ အကယ္၍ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်သို့မဟုတ်ခရီးသွား၊ထို့နောက်အပိုင်းမှာ"ရှာဖွေတဲ့ခင်ပွန်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ"သင်အများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်စားစရာမိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသားများမှပွင့်လင်းနေသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသိအကျွမ်း။
အခါသင်ဘယ်လိုမသိရပါဘူးချဉ်းကပ်ဖို့လမ်းပေါ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူအရပ်ဌာန၌မည်သည့်မိန်းကလေး(ကောင်လေး)၊သင်ကူညီမှလာသင့်ယျနှင့်လက်ထောက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာပရိုဖိုင်းအဘယ်သူ၏ပိုင်ရှင်တွေအတည်းယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများဒိန္းဖြစ်သင်ကြိုးစားဒီနေရာမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှု။ ချိန်းတွေ့ဒိန္းဆင်ပြေသောကြောင့်ယခုသင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေလက်လွတ်ဖို့သင်၏အခြားတစ်ဝက်လက်အောက်တွင်မည်သည့်အခြေအနေ။ သင့်လုပ်ငန်းမှရိုးရိုးဖြစ်ပါသည်ရှာတွေ့နှင့်စနစ်တကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုအပေါ်ကိုယ်ဆိုက်မှအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများဒိန္းပေးနိုင်ခဲ့သည်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့အသင့်ပရိုဖိုင်းကိုအကြားအခြားခြား။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်သင်အနည်းငယ်အကြံပေးချက်များရဖို့ရန်သင့်ရှာပုံတော်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်အပေါ်ဆုံးနဲ့အရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်။ ပထမဦးဆုံး၊အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ဒေါင်းလုပ်များရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူဓာတ်ပုံများ လက်မှတ်ရေးထိုး"ငါငါသာအ နှင့်အတူမိန်းကလေး"၊"ခွေးလေးနဲ့"ဒါကြောင့်အပေါ်။ ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏ဂင်မြင်သာသွားလိမ့်မည်ထွက်နှင့်အတူသင့်ပရိုဖိုင်းကိုချက်ချင်း၊ရေးသားခြင်းမရှိဘဲဘာမှပေမယ့်လည်းကိုထွက်ခွာနိုင်၊အနည်းငယ်အထူးပြောစရာမရှိသော၊သင်သည်အလွန်ကြိုက်မပြုစေခြင်းငှါ။ အဖြေ-လွှတ်တင်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုပဲအလှဓာတ်ပုံတစ်ဘယ်မှာသင်ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်မျက်စိနှင့်အပြုံး၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စုံတွဲတစ်တွဲအခြားသင်၏ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်အုိင္အုိ။ အဓိကအကြောင်းအရာဓာတ်ပုံတွေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ထက်မပိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က။ ဒုတိယ၊ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဒိန္းတစ်ဦးပေါ်တယ်လူတွေမကြိုက်ဘူးလှည့်ဖြားမော့။ ရေးထားအရာအားလုံးအဖြစ်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်သင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြရန်ရန်ဖြစ်လျှင်သင်နတ်ရှိပါတယ်၊သို့သော်အချို့ကျေးကျွန်များမထိုက်၏။ ရိုးရှင်းသောစောင့်ရှောက်စေခြင်း-သင်ကလူတွေကိုဆွဲထုတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့-မကြားရ? ဒါပဲ။ တတိယခြင်းကိုမခံကြ၊လောဘကြီးသည်။ ရေးလုံလောက်တဲ့သတင်းအချက်အသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။ ပြောသင့်ဖြစ်နိုင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အဖြစ်သင်အသုံးစရိတ်ခံစားကြည့်ပါအခမဲ့အချိန်အဘယ်မှာအရာကြွင်းလေကဲ့သို့အဘယျသို့အမျိုး၏ဇာတ်ကြောင်းလိုခငျြပထမနေရာအတွက်သာသင့် အသစ်ချစ်။ ဆုံးနဲ့အရေး၊အယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ၏ဒိန္း၊သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးပါ၊သင်ရှိပါကက၊သူလိုအပ်တယ်။ ပထမအမက်ဆေ့ခ်ျများအစဉ်အမြဲအရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍ၌သင်၏အနာဂတ်စာပေးစာ။ ဒါကြောင့်တက်လာသောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူတင့်တယ်ခြင်းနှင့်မူရင်းသောဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်မီးမောင်းထိုးပြသင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏တို့တွင်အခြား"ဟိုမှာ၊ဘယ်လိုပဲသွားမယ်"သို့မဟုတ်"ဟိုင်း၊တွေ့ဆုံကြည့်ရအောင်၊ကျွန်မရယ်စိမ်း။"
ကိုယ်တော်လေ့လာရေးအတွက်အလှဆုံးအချိန်။ အထီးကျန်အတွက်လက်ျာသေံ? ထူးခြားတဲ့ချိန်းတွေ့ဖီးတင်ပြမှာအလှဆုံးခရီးသွားလာခရီးစဉ်ဒေသအတွက်တစ်ဦးတစ်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏၊သီးသန့်များအတွက်တစ်ဦးတစ်! အသုံးပြုရန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူအသစ်ရဲ့"အချစ်သင့်ရဲ့အိပ်မက်"။ အစဉ်အမြဲအသစ်၊ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်အကြံပြုချက်များထံမှရွေးချယ်ဖို့:အသဲ ကမ်းခြေ၊စွန်ပလွံပင်၊ကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ရေ၊နေ၊လှမြို့နှင့်ကမ်းရိုးတန်းကျေးရွာ။ ကိုယ့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ကတ်မှပရဒိသု။ ဤအရပ်တွင်ကမ်းလှမ်းတဲ့သဘောပွဲကျင်းပ၏။ ကိုင်အပေါ်၊သင်သည်အဘယ်သို့တောင်းဆိုနေတာလုပ်နေတဲ့အတွက်တကယ်ကိုလန်း။ သောကြောင့်၏အစိတ်အပိုင်းသင်သည်သင်၏အိပ်မက်အားလပ်ရက်များ၊အကြွင်းမဲ့၊ပြိုင်ကားများနှင့်တက်ကြွစွာ။ ဒီနေရာမှာဖြစ်စေမည်စံပြလပ်ရက်အဘို့ရည်းစားများအပန်းဖြေနှင့်အားကစား။ ဒီနေရာမှာသင်ရှေ့ဆက်သွားလျှင်၊ထိုအလိုဆန္ဒသို့ခရီးသွားလာအဖြစ်၊ထိုအခါဤဖြစ်ပါတယ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်။ အထပ်မံကွာဝေးသည်၊ပိုပြီးထူးခြားဆန်းပြား၊အမည်မသိ၊ပိုကောင်း။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်များစွာဝေးလံသောနေရာများအတွက်တစ်ဦးတစ်ယောက်အကြောင်းကြီးမားတဲ့လုံလောက်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာခရီးစဉ်။ ဤအရပျ၏မျက်နှာစာတွင်အပင်လယ်ဝံပုလွေသို့မဟုတ်ဝံ? ထိုသူတို့အဘို့၊အဲဒီအရပျထက်မပိုကောင်းအဆိုပါတံတား၊ပင်လယ်၏ရှေ့မှောက်၌သူတို့မျက်စိ၊သူတို့ရဲ့လှပတဲ့အသွင်အပြင်(မွေးမြူရေး)နှင့်ဆံပင်? အားလုံးမှန်တယ်၊ဒီနေရာမှာသင်။ ဒီနေရာမှာသူအပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တောင်ကြီး၊အေးမြလတ်ဆတ်သော၊ပတ်ဝန်းကျင်နှင်းလေ၊အဖြစ်ဝေးမျက်စိမြင်နိုင်ပါသည်။ သာမီလျှော။ ဒီအပြည့်စုံသောနတ်သမီးပုံပြင်ပုံပြင်။ ဒီမှာက ကရင်၊တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စည်းစိမ်ဥစ္စာ မ်က္ႏွာအပေါင်းတို့နှင့်အသစ်အတွေ့အကြုံများ-၏ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပွဲတော်အမြို့မြို့။ ဒါဟာအားလုံးကျောင်းနှင့်ကြီးမားတဲ့မြို့မြို့။ ကုန်၊ကုန်အံ့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိယဉ်ကျေးမှုနှင့်အရသာဖြစ်ကြောင်းလျောက်ပတ်စွာဂုဏ်ယူ။ အတွက်အမှန်တကယ်အားလပ်ရက်များ၊ရောင်းသူများအတွက်၊စိတ်ကိုမျက်စိနှင့်အရသာအတွက်၊ဒီတစ်ခုအပေါ်-လူခရီး။ ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့လိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်သူများနှင့်အကြံပြုချက်များအပေါ်တိုင်ကြားခြင်းနှင့်ခရီးအခြင့္အေ။ ကိုနှိပ်ပါဒီမှာသှားဖို့မှတ်ချက်:ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဆက်အသွယ်မရဖြစ်တင်ပေါ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်တွင်အတည်ပြုလင့်ခ်ကိုဖြည့်စွက်။
အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်ဦးပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဒိန္း၊ငါတို့သည်ပူဇော်အမည်မသိသက်ဂင်၊ဘယ်မှာသင်နိုင်ဘဲ၊ရှုပ်ထွေးရေရှည်ဆက်ဆံရေးနှင့်ထိခိုက်နစ်နာအထိမ္းအမျိုးစုံလင်ရန်ပုံမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာဒါကောင်းရန်မိမိတို့ဆက်ဆံရေးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်တော်သောမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်အကုန်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏အတွေ့သင်ပို့စ်ကြော်ငြာများကို ချိန်းတွေ့ဂင်အတွက်လုံးဝအခမဲ့နှင့်မှတွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့ရှုပ်ထွေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို-ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်အမှတ်။ ချင်လျှင်ရောက်စေဖို့သစ်တောက်တောက်အရောင်အဆင်းသို့ထုံးစံအတိုင်းမိသားစုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၊သင်ဧကန်အမှန်ခံရ၏တွဲအတွက်စိတ်ဝင်စားများအတွက်လက်ထပ်ပြီးဂင်။ ဒီနေရာမှာအခွင့်အလမ်းရှိသည်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ အတူတူလူလို-သူလာဖို့မျိုးစုံလင်မိသားစုဘဝရှိကြောင်းဖြစ်လာ။ ဤအမှု၌၊ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုသင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်အခမဲ့ဂင်သောအပင်ပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖြစ်၊ဒါကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူးသင်ရိုက်ထည့်ရန်အလွန်အကျွံသတင်းအချက်အသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။ လုံလောက်တဲ့တင္ျဓါတ်ပုံများနှင့်သတ်မှတ်အထွေထွေလိုအပ်ချက်များကိုဖို့အလားအလာမိတ်ဖက်ပြီးတော့စတင်ရှာဖွေတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အဘယ်သူလို့မရ။ ကျွန်တော်တို့အပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစူးစိုက်သည်အဂင်နှင့်မော်စကိုဒေသ၊နှင့်ဤသည်ဟုဆိုလိုသည်သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကျင်းပလိမ့်မည်၊ကနေလူတို့နှင့်အတူသင့်ဒေသကခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ချိန်ဖြုန်းဖို့အတွက်အချည်းနှီးလွယ်ကူဖို့ပြောင်းရွှေ့ထံမှအသွင်ဆက်သွယ်ရေးအစည်းအဝေး စစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်လုံးဝအခမဲ့အရပျကြော်ငြာများချိန်းတွေ့၏ဂင်အတွက်အလှည့်အလှည့်ဖို့ဒီနည်းလမ်းကိုရှာဖွေ၏။ အားဖြင့်ကြီးမားသော၊သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး၊သင်ရုံကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာတွေ့လိမ့်မည်နားလည်ခြင်း။ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအညီအမျှဆက်ဆံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အမှန်တကယ်ဖန်တီးခြင်းအသက်၏ပင်ဟေဂင်၊ငါတို့သည်ကောင်းစွာသတိပြုမိအတွက်လိုအပ်ချက်၏ဤအမျိုးသဘောထား၏။ သင်ချစ်သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်၊ဒါပေမယ့်အတိုက္ခိုက္ရေသည်ပျင်းစရာနှင့်ဦးဆောင်။ လိုလျှင်၊သို့သော်ငြားလည်း၊တခါတရံတတ်နိုင်အောင်သစ်တောက်တောက်အရောင်အဆင်းမှလူသစ်အစည်းအဝေးနဲ့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအသက်တာနှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊အကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်အတွေ့အကြုံအတွက်ဂင်နှင့်မော်စကိုဒေသအခမဲ့အဘို့အဆက်ဆံရေးအလွန်ကြီးစွာသောလမ်းရှိနိုင်ပါသည်ခိုင်မာအားကောင်းသင်၏လက်ရှိဆက်ဆံရေး။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊နှစ်ဦးစလုံးအိမ်ထောင်ဖက်ကိုနားလည်လက်ခံသောပွင့်လင်းဆက်ဆံရေး၊ဒါပေမယ့်မအမြဲ၊ဆဲခိုင်င့္လက္တြဲသဘောထားနှင့်ခေတ်ကြယ္ရာအတွက်ဒီနေ့ရဲ့ရှေးရိုးစွဲလူ့အဖွဲ့အစည်း။အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ချိန်းတွေ့ဘို့လက်ထပ်ပြီးဂင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာနိုင်ပါတယ်အမည်မသိနှင့်အတူပုံရိပ်တွေကိုေၾကာ္ျချိန်းတွေ့ဂင်အတွက်။ ကျွန်တော်တို့ဟာနားလည်ဖို့လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်အကောင့်သို့ယူအများဖော်အတွက်အပြည့်အဝသောအခါလိုအပ်သောသတ်မှတ်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အညီသတ်မှတ်ထားသောမိသားစုအခြေအနေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို၏။.
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ချိန်းတွေ့ဒိန္း။ ချိန်းတွေ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်သည်ဖန်တီးဖို့ကူညီအထီးကျန်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်အဆိုပါမြို့။ အဆင်ပြေများအတွက်ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရှာတွေ့၊အဆိုဒ်ထောက်ပံ့ပေးအဆင်ပြေတဲ့ကိရိယာတစ်ခုအဆင့်မြင့်ရှာ။ အပြင်ရှာပရိုဖိုင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါတယ်ကဏ္ဍဆက်သွယ်ရေးနှင့်။ လူမှုရေးပိုင်းအဖြည့်စွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ချက်တင်ဘယ်မှာသင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများအတွက်စစ်မှန်သော-အချိန်။ အသုံးချအပိုင်းရှိပါတယ်အများအပြားစိတ်ဝင်စားစရာအသုံးချလျက်ရှိသောတာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်တွင်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်။ အ သင်တွေ့လိမ့်မည်အရွင္သဂိမ်းများ အွန်လိုင်းစစ်ဆေးမှုများစသည်တို့ကိုအခမဲ့ချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန်းမတ်။ အပေါ်ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဂရမ်ဒိန္း။ အင်္ဂါရပ်များအများစုဟာဆိုက်၏အလုံးဝအခမဲ့။ သင်အကောင်အထည်ဖော်နှစ်ဦးစလုံးအခြေခံပညာနှင့်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှု၊ပုံစံများတွင်စာပေးစာယူနှင့်အွန်လိုင်းချက်တင်လည်းတာဝန်ခံအခမဲ့။ သို့သော်၊အချို့သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများဆိုက်နေဆဲပေးဆောင်၊ဥပမာအားဖြင့်လွဲချော်သွားတာ-အတန်းများအသွင်နှင့်အပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏မေးခွန်းလွှာ၌ရှာ။ သင်လုပ်နိုင်အဖြစ်လေ့လာသင်ယူ၊နှင့်သင်တို့အဘို့ပေးချေသို့မဟုတ်အခမဲ့၊သင်သည်ကိုယ်အဘို့ဆုံးဖြတ်ပေါ်မူတည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဦးစားပေး။ အတော်လေးမကြာခဏလူငယ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများကဆန္ဒရှိမှတ်ပုံတင်ရန်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်နှင့်ရှာဖွေနေမပါဘဲဆိုဒ်များ။ ဒါပေမယ့်တတ်နိုင်သလောက်ရှာဖွေအတော်လေးမပါဘဲမှတ်ပုံတင်အပေါ်အတွက်ကွန်ရက်စာမျက်နှာဒိန္း? ဖြစ်နိုင်၊မဖြစ်ဖြစ်အများစု၏လူကြိုက်အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေးဘူးဆိုသော်ငြား၊ဒါပေမယ့်များစစ်ဆေး။ ဒါကြောင့်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်နေရာကိုယ်ကြည့်ဖို့အစိတ်အပိုင်း၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ၊ဘယ်လိုကြည့်ဖို့။ ဒါပေမယ့်အပြည့်အဝ ကွန်ရက်သင်၏အသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်သာမှတ်ပုံတင်ရေးပြီးနောက်ယူကြောင်းထက်မပိုမိနစ်သင်သည်သင်၏အဖိုးတန်အချိန်။ စတင်သင်ယူသည်။ အနှစ်၊အသုံးပြုသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းရှာတွေ့ဖို့အတွက်တိရစာန်။ အပေါ်ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပါဝင်သည်ကိုအောက်ပါအဓိကကဏ္ဍ:'ရှာ'၊'ဆက္သြယ္ျခင္း'၊'လျှောက်လွှာ'။ အပိုင်းခင္း'ဆက္သြယ္ျခင္း'သင်တွေ့လိမ့်မည်အသီး၊အဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဘလော့ဂ်များနှင့်။ အပိုင်း'လျှောက်လွှာ'တွင်အောက်ပါပုဒ်မ:ဂိမ္း၊ခရီးသြား(အပိုင်းကိုရှာဘို့အခငျြးခရီးသွားများ)အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်မှုများ၊အရွင္သနှင့်များစွာသောပို။ အပိုင်းမှာ'အရီး'ရှိ၏လူကြိုက်အများဆုံးလမ်းကြောင်းအတွက်ွင့္ခရီး။ ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၊နှင့်ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့ကြောင်းသေချာစေရန်အကြောင်းအမျိူးအတွက်ဒိန္းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာသင်ဆောင်ကံနှင့်ပျော်ရွှင်မှု၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်တာ၌။ ပူးပေါင်းချိန်းတွေ့နှင့်သင်သေချာသင့်ရဲ့ဖူးစာကိုရှာပါ။ လျှင်သင်ပြီးသားသင်၏အကျိုးကျေးဇူးများသတိပြုမိဆိုက်ချိန်းတွေ့၊သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှဝေ မိတ်ဆွေများနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်။ နှင့်အောင်မြင်သောချိန်းတွေ့အတွက်မြို့ဒိန္း။။။
လိင်ချက်တင်ချက်ချင်းသင်ဆက်သွယ်ဖို့အကြုံလိင်ကမ်။ လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ပျော်စရာဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူ။ သင်လုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၏အားသာချက်ယူပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်၊သို့မဟုတ်သင်ရာထူးအတွက်အားလုံးလက်လှမ်း။ အကောင်းဆုံးနေရာသည်အမျိုးသားများအဘို့အပတ်လည်ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အတူသင့်ရဲ့အချက်အလက်များရ။ ေလိင်ချက်တင်အခန်းပေါင်း၊သင်နှိပ်ပါစတင်ခွင့်ပြုကိုချိတ်ဆက်ဖို့နောက်ထပ်ကျပန်းရွေးချယ်ထားလိင်ကမ်။ အခါသင်ပြုတူအဆိုပါဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊သင်နှိပ်ပါလာမယ့်ခလုတ်ကိုနှင့်ချိတ်ဆက်လာမယ့်အကြုံ။ ရှိမရှိဒါကြောင့်ပဲအသစ်တစ်ခုချစ်ကြည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းရှင်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောမေတ္တာ၊သငျသညျချင် ဗီဒီယိုချက်တင်လွယ်ကူသည်။
ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းမျှမရှိ ပိုမိုလွယ်ကူထက်ပူးပေါင်းဖို့ကြီးမားသောအရေအသုံးပြုသူများ၏နေထိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာ၏အသွင်။ ဒီကူညီပေးပါမည်ျဖင့္တရားဖမ်းဆီးတော်။ သူအမှန်မှာမည်သည့်အချိန်တွင်မှအနှောက်အဆြးေႏြးထားခဲ့အပါတယ္။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊အဆိုပါစနစ်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်သင်နှင့်အတူလာမည့်အစိမ်း။ အသီးအသီး၏ဤလူစေခြင်းငှါမည်သည့်ထောင့်ဂြိုဟ်၊ဟောပြောဖို့သူတို့၏ဘာသာစကား။ ၏သင်တန်း၊အခမဲ့အတွင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ဗမာတိုင်း၊ဤဘာသာစကားသည်။ မကြာခဏအတွက်ကျပန်းနိုင်ရန်အနှံ့ပီအကိုအောက်ပါဘာသာစကားများ:အင်္ဂလိပ်၊စပိန်၊ဂျာမန်တွေတိုးတက်လာရန်သင့်အသိပညာအတွက်နိုင်ငံခြားသည္။ -ရေးဖို့အစာသားမက်ဆေ့။ လူတွေကမကြာခဏဆက်သွယ်ပြောဆိုဤလမ်း။ ဒါပေမဲ့သူ့ ။ နောက်တစ်ခု၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အကမ်အရေ။ အားလုံးလိုအပ်သောကြောင်းအဘို့မှန်ကန်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူလူများအတွက်ကျပန်းအွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ သင်ရှိသည်အားလုံးအထက္-သင်အပြည့်အဝကရိယာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်၏အမြန်နှုန်းသင့်ရဲ့ပံ့ပိုးပေး၊လိုအပ်ထုတ်လွှင့်မှအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုနဲ့အသံဖိုင်။ ဖို့သေချာပါစေ၊ပေးအပ်ပြန်၏ပြည့်စုံသောစာရင်း"ပါဝင်ပစ္စည်းများ":သင်ကရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အားလုံး-ကျနော်တို့ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။။ အကွာအဝေးတွင်သင်တို့အဘို့အကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်ရေး၏ချက်တင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကား(အင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်၊ဒိန်းမတ်၊အမေရိကန်၊စသည်တို့ကို။)။ သူတို့တစ်ဦးစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ပတ်သက်။ဦးစားပေးနှင့်အားသာချက်များ။ အခါလျှောက်လွှာဝန်၊နှိပ်ပါ"စတင်"(လိုအပ်ပါက၊ခ်ိန္ၫ၏ဝဘ်ကင္မရာချင်သံုျပဳႏိုင္ပါလွ်ာက္လႊာ)၊အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်။ အခက်အခဲပေါ်ထွန်း။ ဘယ္လိုလုပ္ရကင်မရာအလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်? ပထမဦးဆုံးရှိမရှိစစ်ဆေးသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမှန်ကန်သော။ သုံးတဲ့အခါ ၊ဝက်ဘ်အရာမ်ား၊အစီအစဉ်အသင့်ပိတ်ပြီးပြောင်းလဲမှာတစ်ကမ်(ဤအရေးကြီးသော)။
ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စု"ဒိယိုချိန်းတွေ့"။ အတွက်အသံုုးခ်လိမ့်မည်အကြောင်းကြားအားလုံး၏သတင်းနှင့် ။ ပျော်စရာရှိသည်နှင့်ရှာဖွေတကျွန်းတနိုင်ငံသားအခိုက်အဘို့သို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်၊သင်သုံးနိုင်သည်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ဘယ်မှာသင်စတင်နိုင်ပါသည်စကားပြောမပါဘဲ။ ဝန်ဆောင်မှု"ဒိန်းအြန္လိုင္း ရှာဖွေတွေ့ရှိ"ဖန်တီးအားလုံးအခြေမှအလုပ်သင်အဆင်ပြေ။ အသုံးပြုသူများရွေးချယ်သောသူအခမဲ့ဗားရှင်းထောက်ပံ့အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေအဖို့ခွင့်ပြုချက်တင်ကနေတဆင့်ကမ်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သောအခြားဝန်ဆောင်မှုများပေး။ အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်နေ့ပေါ်မူတည်ပြီး၊ထိုရွေးချယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးအခိုက်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်အမ့္မယ္။ မတူပုံမှန်အတိုင်းအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း၊နှိုင်းယှဉ်ဖို့သာသောအတူအလိုအလြောကျွမ်းနှင့်အတူပထမဦးဆုံးရရှိနိုင်သောသူတစ်ဦးအပေါ်လမ္း။ ထိုကွာခြားချက်အတွက်ဘေးကင်းရေး၊ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်လိုအပ်ချက်အဘယ်သူမျှမမှအိမျတျောကိုစွန့်ခွာ။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်အမြဲတန်ဖိုးအားဖြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်မှစွမ်းရည်ကိုကြည့်မှာသာမန်လူတွေနှင့်အဆင့်အတန်းအသက်လမ်းဖြစ်၏။ ဖွဲ့စည်းခြင်း၏တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူနိုင်ငံခြားမှအများဆုံးဝေးလံခေါင်ဖျားနိုင်ငံများတွင်ခွင့်ပြုဒိန္းဘာသာစကားသင်ယူရန်၊မေးရန်မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်သောအပြည်၊အသစ်အဆက်အသွယ်၊အရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးမှ ဧည့်သည်များအသီးအသီးအခြား။ သုံးချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ရန်အွန်လိုင်း"ဒိန်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့"အဖြစ်၊သင်ထည့်နိုင်တိကျသောအသုံးပြုသူများသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အနာဂတ်အတွက်အသုံးပြုအတူတူအရင်းအမြစ်။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်လွှဲပြောင်းအခြားအရင်းအမြစ်များနှင့်လူမှုကွန်ယက်များ၊နှင့်အာရုံစူးစိုက်။ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်အွန်လိုင်းဖန်တီးခြင်းအဘို့အမသာချည်ချိန်းတွေ့နှင့်မိတ်ဆွေတွေကိုရှာဖွေ၊သို့သော် ။ ခုန်နေဖြင့်ပါတီအချင်းချင်း၊အတူတက်လာမယ့်ဟာသနိုင်ရန်အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်သင်တို့မြင်သည်၊သင်ကကိုပယ်ရှားနေစဉ်။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း"ဒိန်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့"-ကယ္တင္ျေ မဟုတ်ကြဘူးသောသူကဲ့သို့ဖြည့်ဆည်းဖို့လမ်းပေါ်မှာ။ ထိုသို့တစ်ပျော်စရာအပျြော၊တတ်နိုင်သောအချို့သောအချိန်များအစားထိုးဖို့အသက်ရှင်သောချက်တင်။ အွန်လိုင်းချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း"ဒိန်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့"ဒိန္းလြယ္ကူအဆင္ေခမဲ့အင်္ဂါရပ်များ၊နှင့်စျေးပေါဆပ် န္ေဆာင္မႈပါဝင်သည်သောအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်။ စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်အသုံးပွုနိုငျအခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ဘဲ။ လည်ပတ်ကင္မရာ၊ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားပြီးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းသင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးအဖော်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားတိုးတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့အဆင့်အရည္အခ်င္း။ တစ်ယောက်ယောက်ထဲမှာဝေ့အမျိုးမျိုးလူမှုကွန်ရက်၊အဘယ်ကြိုတင်ဆွေးနွေးဖို့အလွန်ဘာသာရပ်။ တစ်စုံတစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူဆကျသှယျဖို့အတွက်ဝဘ်နှင့်အတူစကားပြောကျပန်း ။ သွင်ခရီးသွားအခမဲ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲပိုမိုလူကြိုက်များဖြစ်လာများထဲတွင်လူအများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်၊အလုပ္အကိုင္၊ဝါသနာနှင့်ဦးစားပေး။ ဘာလျှို့ဝှက်ချက်သည်အဘယ်အဓိကအပြစ်တွေထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေး
ဒါဟာရှာရန်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ဒါကြောင့်အလွယ်တကူ၊၊ဆွေမျိုးသားချင်း၊သူငယ်ချင်းတွေ၊ငါအမျိုးသားချင်းဝိညာဉ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ကြွေးကြော်ကမ္ဘာအနှံ့ကသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု၊တခါတရံပခုံး၏ပခုံးမှအော်ဟစ်။ ငါကယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်၊အလမ္း၊အယူအ လက်ဖြင့်မခေါ်:မှာကြည့်ကြည့်ပါငါ့အဗီဒီယိုအောင်ငါ့ကိုကောင်း၊သျောအဘယျဖြစ်ပျက်? ဒါဟာမမှန်အခြေအနေ၊ဒါဟာမမှန်အပေါ်လမ္း၊နှင့်အရာအားလုံးအပေါ်တတ်နိုင်သမျှ။ ဗီဒီယိုစကားပြောခဲ့သူများကဖန်တီးဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အ။ ဤဆက်စပ်ဖန်တီးခဲ့ပြီးနောက်စကားပြောခဲ့သည်၊ဒီနွေဦးရာသီ။ တဖြည်းဖြည်း၊၏နိဒါန်းနှင့်အတူနည်းပညာသစ်၊ဒါကြောင့်အလွယ်တကူကူးပြောင်းဖို့ဗီဒီယိုချက်တင်။ ရိုက္ထစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အပြောင်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာတည်းခိုဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့သင်တန်း၏၊ပိုကောင်းကြောင့်မှတ်ပုံတင်ရန်(ထောက်ပံ့သောကျော်ရှစ်နှစ်အရွယ်)။ အတွက်၊သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်၊ဂီတနှင့်ဗီဒီယိုများဝယ်လိုအားအပေါ်၊ဝဘ်ကမ်များ၊ဖိုရမ်များ၊ဓာတ်ပုံပြခန်း၊အတုပြည်ရဲ့ရုံးနှင့်ဆိုင်၊သင်နိုင်မှဓာတ်ပုံများစေလွှတ်မည်အချက်တင်၊အများကြီးပို အခြား။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအင်္ဂါအသုံးပြုသူများအတွက်အစည်းအဝေးကြီးမားတဲ့မွို့၌။ ဒီတော့ဝေး၊အမှန်တကယ်စည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ကြသည်သာဗာ၊ဒါပေမယ့်ဒေသခံများ၏အခြားမြို့တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်ယူကရိန်း၊သူကိုစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံစာ၏ထိုကဲ့သို့သောအစည်းအဝေးမှာအဖို၊အလင်းအားဖြင့်ဤစိတ်ကူး။ ဤသည်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်။ အထောက်အကူပြုသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူစုစည်းဒီယိုကွန်ဖရင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊ဖွင့်နဲ့အပိတ်ပါ။ မည်သည့်ချက်တင်စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်လှစ်ဒီယိုကွန်ဖရင်၊ဒါပေမဲ့အနီးကပ်ကိုလူတစ်ဦးသင်စေလွှတ်ခြင်း၊ပင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်သူတို့တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်။ တစ်ခုန့်အသတ်အရေအတွက်များ၏ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်ဗီဒီယိုကိုရှင်းလင်းပွဲ၊ဒါပေမယ့်အများဆုံးရှစ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်ရာတွင်ကင်မရာအသုံးပြုရန်အဘယ်သူသည်? သူတို့အသုံးပြုကြသည်အကောင့်ကိုမလိုအပ်တဲ့ဂီယာကိုလှည့်ပေါ်။ ဆွစ်ဇာလန်ချက်တင်အမြဲပုဂ္ဂလိက၊ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချက်တင်ဘယ်မှာသင်ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါသည်မည်သူမဆိုထံမှသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းနှင့်အတူပဲ။။။။ ဆွစ်ဇာလန်ချက်တင်၊မှလွဲပုဂ္ဂလိကဗီဒီယိုကွန်ဖ၊အရာ၌သင်သာပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်ဖိတ်ကြား၊နှင့်အရှင်"ဆွစ်ဇာလန်ချက်တင်"ရန်ဆုံးဖြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်ရှိသောအခါ။ ဒီအသုံးပြုသူများဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါသည်အသီးအသီးအခြားအဖို့သူတို့ရဲ့"ဆွစ်ဇာလန်ချက်တင်"။ ဗီဒီယိုစကားပြောသူများကဖန်တီးသောသူသည်လူများအဘို့ရာ။ စကားပြောလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဖြစ်အလားတူအစီအစဉ်ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ရုံရန်လိုအပ်ပါတယ်ပေးဖို့မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှလင့်ခ်ဗီဒီယိုချတ်နှင့်သူ့ကိုရှာတွေ့တို့တွင်အခြားလူများအတွက်။ ဒါဟာဆင်တူသည်ရုရှားဗီဒီယိုစကားပြော၊ဒါပေမဲ့နှင့်အတူအဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များအတွက်ရှာဖွေနေ။ လောလောဆယ်၊ရုရှားဘာသာစကားနှင့်အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းများမှာ။ ဆိုက်ဘာသာစကားကအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်္ကေတနှင့်အတူအလံ။ အတွက်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊သငျသညျရှေးခယျြနိုငျအများညှိနှိုင်းမှုမိတ်ဖက်အဆိုအရစံသတ်မှတ်ချက်၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး။ ဤသို့ဝင်သဖြင့်ထိုကျားများကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျား၏အ ရှာတွေ့ချင်၊အဆိုပါစနစ်ရှာဖွေမှုနှင့်ချိတ်ဆက်။ ဗီဒီယိုချက်တင်အသုံးပြုသူအများတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ပိတ်ပင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းဗီဒီယိုချက်တင်၏သင်တန်းသားများအတွက်တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြား၊တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အ (အကြားချက်တင်အသုံးပြုသူများရှိပါတယ်သိသိသာသာနည်းပါးလာ)။ အားလုံးတရားစွဲဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်တစ်ဦးပိတ်ပင်ထားမှုအပေါ်လိပ်စာများ၊ ဒီအမြဲတမ်းပိတ်ဆို့ဖို့လက်လှမ်း။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားအပေါင်းတို့သည်အဖက်ဖက်တွင်။ ဒီ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊အဘယ်မှာသင်တွေ့လိမ့်မည်အထီးနှင့်လူကြိုက်အသံနှင့်ထူးခြားဥာဏ္စမ္းမ်ား၊ဖိုရမ်များ၊ဓာတ်ပုံများ၊ဗီဒီယို၊ဂီတ၊ဘလော့ဂ်များ၊ကြော်ငြာနှင့်စစ်တမ်းများ။ လူတိုင်းတစ်ခုခုရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုအလုပ်အရသာနှင့်အတူ။ အနိုင်အရှိဆုံးစွယ်ပျင်းသည်မှတ်ပုံတင်လိုအပ်ချက်။ အပေါ်၊သင်အလွယ်တကူအမြင်များ၏စာရင်းကိုအသုံးပြုသူများနှင့်အွန်လိုင်းပြသပေးခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူများအားဖြင့်ကျား၊ခေါင်းစဉ်၊အွန်လိုင်းပြရန်၊သို့မဟုတ်လျှောက်လွှာ။ ဒီေနရာဂုဏ်မိသားစု၊မိတ်ဆွေ၊အသိအကျွမ်းအပေါ်အားလပ်ရက်သို့မဟုတ်ပဲအသာယာသောအံ့အားသင့်အသွင်တူလက်ဆောင်။ သင်ပေးချင်အဆိုပါစာရေးဆရာအကြောင်းသင်ပြပွဲနှင့်သင်ပေးဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး? အကယ်ဒမီဆု။ သင်တိုးတက်စေချင်တဲ့တည်နေရာသင့်ရဲ့အသက်ရှင်သောမြစ်ရေသည်? သင်၏ရမှတ်တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းအားဖြင့်အော်သည်။ ရောင်စုံအပြုံးအကူအညီသင်အမြန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အခါလူသစ်တည်ဆောက်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေး။ သင်သည်လည်းကျင်းပ အကွိမျမြားစှာဗီဒီယိုချက်တင်။ ထိုအခါဆက်သွယ်ရေးဖြစ်လာသည်ပင်ပိုမိုပြင်းထန်သော၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်အစွန်းရောက်။ မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်ပတ်သက်သူများရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားအွန်လိုင်းဂိမ်း၊စာရင်းအရာများအဆက်မပြတ်ရေးသား။ မကြာမီကာလအတွင်း၊ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်ဗီဒီယိုချက်တင်:နိုင်စွမ်းဘလော့ဂ်ရေးဖို့၊စံချိန်တင်နှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုစကားပြောဆိုချက်တွေကို၊ဖန်တီးအုပ်စုအသိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်အပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား၊အများကြီးပို။ အများစုကကျေးဇူးတင်စကားအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေ။ လုပ်တွေအများကြီးတွင်မကြာသေးမီကဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးဆက်သွယ်ရေးအတွက်သူတို့ကိုမှလျှော့ချနေကြသည်။ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ကြလျှင်သင်သည်အလုပ္ပါ၊ဘာလဲသိလားငါအကြောင်းပြောနေတာပေါ့။ သင့်ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်း၊ငါကသွားကြဖို့ပထမဦးဆုံးဗီဒီယိုစကားပြောရန်အပျော်တမ်း၊ဒါပေမယ့်မအနှောက်အယှက်၊၊အခွင့်အလမ်းအလွန်ကောင်းသဖြင့်အနိုင်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုအများအပြားဧည့်သည်များ။ နှင့်ငါအမှန်အတွက်တွေ့ဆုံရန်။ ငါထင်တယ်နေမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဖန်အတွက်တကယ်အသုံးဝင်။ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ထိုကဲ့သို့သောအစည်းအဝေး။ ကောင်းသောအချိန်။ ငါအတွေ့အပြားအရင်းအမြစ်များရှိရာနိုင် သင်ရှာတွေ့နိုင်အောင်ဒီအကြောင်းရပ်ရွာ။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ-အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ၏ဗားရှင်း ။ လျှင်သင်ချစ်ဖွယ်၊ပျော်စရာချက်တင်နှင့်အတူအွန်လိုင်းမိန်းကလေးများ၊သင်လက်ျာအရပ်မှလာ! ဂျာမန် မွဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုင္မ်ားအစာရှောင်ခြင်း၊လွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှုချက်တင်ဖစ္သျကစားတဲ့ကွန်နက်ရှင်နှင့်အကွာအဝေး၏ဆန်းသစ်သောအင်္ဂါအဘို့အချောမွေ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပိုပြီးပျော်စရာ။ သင့်အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေး၏ဆွစ်ဇာလန်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများ။ ကိုယ့်မတ်ကျနော်တို့တွေဟာဘာကြောင့်ထွက်ရှာလိုတဲ့ ၊သာပိုကောင်း! သို့မဟုတ်ပဲအဖြစ်နှင့်အတူစကားပြော။ ရျဖင့္စကားပြောဆိုချက်တိုင်းနာရီအသစ်နှင့်အတူလူသူပျော်မွေ့ရန်လိုမဲ့ ဗီဒီယိုနှင့်အတူသင်နှင့်အခွင့်ကောင်းယူအမြတ်အင်္ဂါအဘို့အပိုပြီးလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးပျော်စရာအတွေ့အကြုံကအခြားစာမျက်နှာ၏ဆိုက်မပူဇော်။ ယူပြည့်အဝအားသာချက်ငါတို့၏အခမဲ့စမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့်နှင့်ဘဲမှတ်ပုံတင်ရန်ရှာတွေ့သောသူသည်စကားပြောဖို့သင်သာအကစားတဲ့စကားပြောနေစဉ်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အသုံးပွုဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ပဲအသုံးပြုကင်မရာနှင့်ကျပန်းမိန်းမသည်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်သင်သည်သင်၏၊ကိုယ့်ကိုနှိပ်ပါ"နောက်တစ်ခု"။ မေ့လျော့သင်အရာအားလုံးကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သိရန်အဘယ်အရာကိုသင်ယုံကြည်။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိသူများကဖန်တီးအနေနဲ့ဆန်းသစ်တဲ့ဗီဒီယိုကစားတဲ့စနစ်ကမ်းလှမ်းကြောင်းအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပြီးအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။ ခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်ခံစားကြည့်ပါစိတ်ကူးသစ်ကိုအင်္ဂါအလုပ်၏အတွေ့အကြုံပင်ပိုကောင်း။ ပီတိလိမ့်မည်ဟုအစမှ၊ဆွစ်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယို-နာရီနှင့်နာရီမွကင္မရာကိုကင္မရာကစားတဲ့အတွက်အမှန်တကယ်အချိန်နှင့်ရပ်တန့်! စတင်ရန်သင်၏အခမဲ့အခုနှင့်တွေ့ဆုံအမျိုးသမီးအခုချက်ချင်း
ချိန်းတွေ့အတွက်အမျိုးသားများဒိန္းများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်ချစ်ကြည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့၊စိတ်ဝင်စားဖို့ဆက်သွယ်ရေး၊အမျိုးသမီးရဲ့ဖိုရမ်တစ်ခု၊တစ်ပင်လယ်၏အချက်အလက်အပေါ်ခေါင်းစဉ်၏"မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဒိန်းမတ်"၊"စိတ်၏အျခား၊"စသည်တို့ကို။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန်းမတ်။ တွေ့ဆုံရန်နှင့်ချိန်းတွေ့အသစ်၊အဂင်-အလိုတူနေ့စွဲအပေါ်သွားနေတဲ့ယောက်ျားသည်အသက်နှစ်ဆယ်။ ဒီနေရာမှာရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူတစ်ခုတည်းအတွက်လူဒိန္း။ မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်"တွင်ချိန်းတွေ့ဒိန္း"။ သင်အတွက်အသက်ရှင်ဒိန္းသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိနေကြသည်ရရန်အကျွမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးဒိန်း? ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူလျောက်ပတ်သောအမျိုးသားများတွင်ဒိန်းမတ်ကိုဖန်တီးရန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အိမ်ထောင်နှင့်မိသားစု။ ချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန္း၊ချိန်းတွေ့အလိုး။ အမျိုးသားများထံမှဒိန်း။ ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဒိန္းဖန်တီးရန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အိမ်ထောင်နှင့်မိသားစု။ မေတ္တာကိုရှာတွေ့ဒိန္းဖြောင့်။
Таанышуулар Дания. Сайт знакомств Дания бекер, каттоосу жок, үчүн олуттуу мамилелер
နှင့်အတူမိန်းကလေးများ အဘယ်မှာရှိကိုသိကျွမ်းရ ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အလေးအနက် ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပါ ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးအခမဲ့ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့ ၁၈ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များ ၁၈ နှစ်အခမဲ့ လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆှဗီဒီယိုစကားပြောခန်းစုံတွဲများအဘို့